Faransiiska (Af Faransiis : La France; Af-Carabi: فرنسا‎) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyadda Faransiiska (Af Faransiis : République Française; Af-Carabi: الجمهورية الفرنسية‎) waa dalka mid ah dalalka kuyaala galbeedka qaarada Yurub. farnsiisku waxa uu kakoobanyahy dhul kal fog fog iyo jasiirado kuyaala goobo aad uga fog dhulwaynaha faransiiska waxa kale oo farnsiiska kamida halka looyaqaano Faransiis Guyana iyo jasiirado aad ubadan oo cidhifyada caalamka kuyaala dadka wadanka farnsiiska udhashay waxa wadankooda ay uguyeedhaan (Hexagone) oo macneheedu tahay Lix geesood. wadanka farnsiisku waxa uu xuduud la wadaagaa Wadamada Midowga boqortooyada Britan Beljim Luksemburg Jarmalka Iswisarland Talyaaniga Monako Andorra Isbania sida oo kale farnsiisku waxa uu xuduud la wadaaga wadamo kabaxsan qaarada Yurub sida, Barasiil Surinam Nederlaan Antiilis. Farnsiisku waa mid kamida Aasaasayaasha Midawga Yurub.waana wadanka ugu wayn midawga yurub. sidoo kale waxa uu farnsiisku kamid ahaa xubnihii aasaasy Qaramada Midoobay.waxa kale oo kamidyahay xubnaha rigliga ah ee Golaha Amaanka inta badan dadka farnsiiska ahi waxa ay haystaan diinta Masiixiyad waxa kunool sidoo kale dad gaadhaya ilaa shan milyan oo haysta diinta Islaamka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Faransiiska&oldid=235307"
Last edited on 7 May 2022, at 04:09
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 May 2022, marka ee eheed 04:09.